Uhlobo | Ucanzibe 2022
Iipili ezi-8 ezinesitayile esiphindwe kabini njengoGcino olongezelelweyo
Kungenxa yokuba akunamsebenzi ukuba unekoloniyali ethe tyaba okanye indlu ye studio enamamitha ayi-600, wonke umntu unokusebenzisa indawo yokugcina encinci.
Iitafile eziLungileyo zokuNgena ezi-8 zeZithuba ezincinci ezingaphantsi kwe- $ 300
Unengxaki yokufumana itafile enesitayile eza kulunga kwindlela yakho encinci yokungena kwaye ikunike indawo yokulahla imeyile, amaqhosha kunye nezinye iziphelo ezikhululekileyo? Ukukhangela isiqwenga esinjalo kunokuba nzima, kodwa ndithembe: Kukho izinto ezinomtsalane, ezisebenzayo, kunye nefumanekayo ezifumanekayo phaya.
Iitafile zokutya zangoku ezijikelezayo: I-West Elm, i-IKEA kunye nokunye
Siyazithanda iitafile zokutya ezingqukuva, ikakhulu kuba zikuvumela ukuba ucofe abantu abaninzi kwisithuba esincinci. Nazi ezinye zeentando zethu, ukusuka kuyilo olutsha ukuya kunyamezelo lwakudala. Ukuba sijonga istaples se-IKEA, kukho i-Tulip-style DOCKSTA, kodwa sibona ubuhle kwi-SALMI elula, nayo. I-Chrome kunye neglasi, ngaphantsi, kodwa okwangoku.
10 Best Dish Towels eziya ukufunxa nasiphi na umyalezo ngokulula
Siqokelele iitawuli zesitya ezifunxa kakhulu eziqinisekisiweyo zokugcina izitya zakho zomile kunye nekhitshi lingenabala.
Ii-Mugs ezi-7 zeMonogram ezifumana iSitampu sethu sokuVunywa
Ukujikelezwa kweekomityi zeemonogram ezipholileyo kwintengiso, kubandakanya iAnthropologie, i-Etsy, kunye noMbutho6.
Indlela yokwenza ibhafu yakho ibambe amanzi ngakumbi ukuze ungene nzulu
Emva kweveki exakekileyo, sihlala sijonge phambili ekuthatheni uxinzelelo kunye nokuntywila ixesha elide ebhafini. Ibhafu yethu ye-clawfoot kwaye iyathandeka, kodwa nantsi ingxaki. Ivalve yokugcwala ibekwe iphantsi kakhulu kangangokuba amanzi aqala ukukhupha amanzi ngaphambi kokuba ibhafu ibekho naphi na. Sihlolisise iwebhu kwizisombululo zoku siza kuthi sabelane ngazo, kunye nesisombululo sethu esonwabileyo.
Iziqithi zeButcher eziPhezulu ziiBoos, IKEA, iMetro Shelving kunye nezinye ezimbini
Abantu abaninzi bandibuze ukuba yeyiphi eyona ndlela ilula yokwenza ikhitshi elincinci, kwaye impendulo yam ihlala ikukufaka ibush block Island ukuba unakho. Incinci okanye iphakathi, isiqithi sebhlokhi esiqinileyo songeza ukufudumala kunye nokusebenza ngokwandisa indawo yakho yokubala kunye nokukunika indawo ephambili yokusebenza kuyo yonke indawo. Andikwazi ukuphikisana ngokwaneleyo. Le ingentla yeyam kwaye yifavefa, ndihlala kumagumbi amabini (le pic ikweyam yakudala).
Ngaba ufuna uMhombiso ongaphezulu weMali yakho? Thenga isipili ngeshelfu eyakhelweyo
Iipili ezinamashalofu ziya kuba yinto eyaziwayo yoyilo kwi-2021.
Iindawo ezi-8 zokuSimahla (!) Iingcebiso zokuhombisa ngeNgcali-Ngaphandle kokuShiya iKhaya lakho
Ngokufutshane ukuba uqeshe umyili, zimbalwa iinkonzo ze-Intanethi ezilungiselelwe ukunika iingcebiso zokuhombisa ezixabisekileyo ngaphandle kwendleko kuwe. Funda ngeendawo ezifanelekileyo zokufumana uncedo lwasimahla lomyili wezinto ezingaphakathi.
Ezona zixhobo zoBalulekileyo zeoyile zokukunceda uhlale ukhululekile kobu busika
Ezi zezona zisasazi zeoyile zibalulekileyo kuzo zonke iintlobo zamakhaya nendawo, kubandakanya neoyile efanelekileyo kunye neyona nto ibalulekileyo.
Akusekho Mayee okuGumbela amancinci: Iindawo ezi-6 zokongeza iishelufa zoGcino oluNgakumbi
Ngaba unobunzima bokufaka yonke into kwigumbi lakho lokuhlambela elincinci? Isisombululo sinokuba zishelufa (kwaye nantsi indawo yokuzibeka).
Izinto ezi-6 ekufuneka uQalile ukuZazi ngaphambi kokuthenga iTV… Xa zonke ziJongeka ngokufanayo kuwe
Zixhobise ngezi zixhobo zintandathu zolwazi (ezibaluleke kakhulu), kunye nentuthuzelo ejikeleze ijoggon, kwaye uya kusetelwa ukuthenga iseti efanelekileyo.
Nceda Hlala phantsi: Izitulo zokutyela ezi-Stylish Upholstered Dining kulo lonke uhlahlo-lwabiwo mali
Siye sayokukhangela izitulo zokutyela eziphakanyisiweyo eziza kuba mnandi kwiindwendwe zakho ezingasemva kunye nasezantsi-kwaye ujongeke kwigumbi lakho lokutyela, kananjalo.
Nantsi indlela yokuYila indawo yakho engaphandle-kwaye mhlawumbi uFumane iGumbi leOfisi yaseKhaya yangaphandle-eneShedi yanamhlanje
Xa ucinga ngeshedi yasemva kwendlu, into yokuqala ethi qatha engqondweni ayisiyiyo indawo yokusebenza ezaliswe lilanga okanye igumbi elilungelelaniswe ngokugqibeleleyo. Ngokwesiqhelo imifanekiso edityanisiweyo yeyamatyotyombe asebhodini anezixhobo ezirusi zerhasi kunye nemigangatho engqongwe ngumhlaba. Nangona kunjalo, ishedyuli inokuba ngaphezulu kweeklasikhi zakho zangaphandle ezingafunekiyo. Ngapha koko bevela kude ngee-ramshackle boxy units onokuzikhumbula.
I-Counter Height Dining Sets Siyayithanda
Khulisa indawo yakho encinci ngezi seti zokuphakama zokuphakama zokuphikisa - imilenze yakho iya kukubulela.
Izitulo eziPhakamileyo ezi-15 Uya kuDlula ngaphezulu (kwaye bayakuDrool)
Sichitha ixesha elininzi ekhitshini. Sichitha ixesha elininzi ekhitshini lethu. Into yokugqibela ofuna ukuyifaka kweso sithuba yi-hunk enkulu enkulu yeplastiki enamahlathi emvula! Nazi ezinye izitulo eziphakamileyo ezibukeka zintle kwaye zinxibe ixesha elide, oya kuthi usebenzise abantwana abaninzi kuzo kwaye ungadinwa kukubona (kunye nokuzisula) ngemini. 1. Sihlalo oPhakamileyo kaSvan Signet. Isitulo esinokwenziwa ngokwezifiso nesigqubuthelo sokuhlala, songa isihlalo sebhakethi se-bentwood.
Iishelufa ezili-10 ezivela eAmazon eziza kukunceda ufumane umthetho wakho kunye (ngemali engaphantsi kweedola ezingama-30)
Ukuba uluhlobo lomntu odinga yonke into ekhayeni lakho ukuze ubenendawo kodwa usafuna ukucoceka, ukubonakala okulula, mamela: Iishelufa ezidadayo yindlela yakho eya phambili. Nazi iindlela ezintlanu zokubeka ezi shelufu zomlingo ukuba uzisebenzise kwigumbi lakho lokuhlala kunye nezinye iindlela ezilula zokuxhoma kwindawo yakho.
Iindlela ezi-5 zokuQhekeza-ubungqina boMnyango wakho wangaphambili
Kubekho iliza elincinane lokuqhekeza kunye nobusela obuncinci kwindawo esihlala kuyo kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, ezininzi zisenzeka kanye kumnyango wangaphambili wamakhaya alapha.
Izizathu ezili-15 kufuneka ucinge ngepinki kwigumbi lakho lokulala
Ipinki ibingumbala odumileyo kule minyaka mihlanu idlulileyo okanye kunjalo, kodwa ibingakhange ibenengcambu epheleleyo kwigumbi lokulala-oko kukuthi, kude kube ngoku. Ngomxube olungileyo wempahla — kunye nomthunzi ofanelekileyo wepinki- igumbi lokulala linokuxhomekeka kwiitoni ezi-blush, ipesika, kunye ne-bubblegum ngelixa lisakhangeleka liphucukile kwaye langoku.
Ezi Tawuli zeBhafu zokuFunxa eziGqibeleleyo zilungele ihlobo (nangaphaya kwalo!)
Iawuli yokuluka i-Waffle ayifunxwa, ayisindi, kwaye yokomisa ngokukhawuleza, oko kungathethi ukuba isitayile ngokupheleleyo. Siqokelele iintandokazi zethu ezigqibeleleyo zehlobo nangaphaya.
Intsingiselo yokomoya ye-911
Ithetha ntoni ingelosi engu-999
222 ithetha ukuthini